कुन राशिका युवतीलाई पर्छन् कस्तो सासु ? राशि अनुसार जान्नुहोस् सासु-बुहारीको सम्बन्ध – Patrika Nepal
कुन राशिका युवतीलाई पर्छन् कस्तो सासु ? राशि अनुसार जान्नुहोस् सासु-बुहारीको सम्बन्ध
मंग्सिर २६, २०७८ आइतबार 42
काठमाडौँ । हरेक युवतीले बिहेभन्दा पहिले देखि नै धेरै सपनाहरु सजाउने गर्छन । र उनीहरुको मनमा बिहेलाई लिएर धेरै कौतहताहरु आउने गर्छन।
आफ्नो सपनाको राजकुमार मिलोस भन्ने सबै युवतीहरुको चाहना रहने गर्छ । साथै बिहेपछि कस्तो पो बुढा मिल्ने हो, घरपरिवारको मान्छे कस्तो पो होलान, बुझने होलान कि नहोलान भनेर अनेक कुराहरु खेलाएर गर्छन ।
सबैभन्दा मुख्य कुरा त मलाई कस्ती सासु पर्लिन भनेर केटीहरु बेलाबखत चिन्ता मान्छन् । ज्योतिष शास्त्रमा हरेक व्यक्तिको भविष्य कस्तो रहने बारे अड्कल लगाउने गरिन्छ भने विवाहको सम्बन्धमा पनि राशी अनुसारको वैवहारिक सम्बन्ध साथै परिवाको निर्धारण रहने गर्दछ।
राशी अनुसारको फल मिल्ने हुँदा कुन राशी भएका युवतीलाई कस्तो व्यवहार भएकी सासु मिल्छ भन्ने यसरी थाहा पाउन सकिन्छ। जुन निम्ननुसार छ।
मेष राशि: सासु तेज स्वभावका रहने गर्छन। यस राशिका व्यक्तिको सासु कडा स्वभावका कारण घरमा खासै शान्त वातावरण रहन गार्हो हुने गर्छ। मेष राशिका युवतीहरुको सासुसँगको सम्बन्ध खासै राम्रो हुन गार्है रहने गर्छ।
वृष राशि: सासुसंगको सम्बन्धमा सधैँ उतार चडाब रहने गर्छ। यस राशी हुनेहरुको सासुबाट कहिले माया मिल्नेछ भने कहिले दुख मिल्न सक्ला। यस राशी हुनेहरुको सासुसँगको तालमेल मध्यम रहने गर्छ।
मिथुन राशि: अनुरुपको सासु मिल्ने गर्छ। यस राशिको सासुसँगको सम्बन्ध धेरै नै सन्तुलित रहने गर्छ। साथै सासु-बुहारीमा राम्रै ताल-मेल बन्ने गर्छ। तर विचारधारामा भने खासै मेल नहुने हुन्छ।
कर्कट राशि: सासुसँग प्रतिष्पर्धा हुने गर्छ भने यस राशिका सासु सुन्दरताको मामलामा घमण्डी रहने गर्छन। जसका कारण सम्बन्ध बिग्रने गर्छ। परिवारको मामलामा एकरुपता हुन सके पनि आन्तरिक रुपमा भने यस राशी हुनेहरुको सासुसँगको सम्बन्ध खासै राम्रो रहदैन।
Nextश्रीमान बे’पत्ता घरमा छिर्न दिएनन आमाछोरीको रुवाबासी|बिहे नगरे मर्छु भन्नेले बिहे गरेर पलपल मा’र्यो(भिडियो)
ओमिक्रोनपछि कोरोनाको अर्को भेरियन्ट पनि भेटियो, ४६ पटक रुप फेरिसक्यो
यसकारण धोएर पकाउँनु हुँदैन कुखुराको मासु